Walcott Oo Sheegay Inuu Doonayo Inuu Noqdo Halyey Ay Kooxda Arsenal Xusuusato - jornalizem
Walcott Oo Sheegay Inuu Doonayo Inuu Noqdo Halyey Ay Kooxda Arsenal Xusuusato
Ciyaaryahanka kooxda Arsenal Theo Walcott ayaa shaaciyey inuu doonayo inuu la sii joogo kooxdiisa Arsenal isla markaana uu noqday halyey sida Thierry Henry.
Ciyaaryahanka baalka uga ciyaara Gunners Walcott ayaa beeniyey in dib u dhaca ku yimid saxiixa heshiiska cusub uu ku lu leeyahay arrimo ku saabsan lacago balse waxa uu qirey in heshiiska uu si tartiib ah ku socdo.
Tababare Arsene Wenger ayaa ka digey toddobaadkii la soo dhaafay in kooxda ay ku qasbanaan doonto inay iibiso Walcott iyagoo hore xaggaagii ay u muuqatay in ay qarka u saarnaayeen inay iska iibiyaan ciyaaryahankan. Haddii aan heshiis la gaarin kahor xilliga uu furmayo suuqa kala iibisga ciyaartoyda.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Walcott uu doonayo in loo xaqiijiyo in uu waqti badan uu ciyaaro uu ka helayo kooxda gaar ahaan dhinaca weerarka.
Walcott oo ka dhaxlay maaliyada No 14 Henry ayaa u sheegay ESPN “ Waxaan doonayaa in aan noqdo halyey Arsenal ah, Thierry Henry waxa uu ku soo biirey kooxda isagoo 22 jir ah anigana waxaan doonayaa in aan noqdo sida isaga oo kale, dhinaca horena ka ciyaaraya. Taas oo ah arrin igu weyn aniga.
‘Waxan ka ciyaaray baalka midig waxana aan helay fursad aan dhinaca horena kaga ciyaaro marka waxaay ila tahay in arinta ay tahay waqti kaliya.’
Wadahadalo la doonayay in heshiis cusub uu u saxiixo 23jirkan Arsenal ayaa waxa uu gaaray meel aad u adag bishii hore markii uu Walcott diiday heshiis shan sano ah oo uu toddobaadkii qaadanayao lacag gaareysa £75,000.
Waxana la soo weriyey in Walcott uu ku dhegen yahay in toddobaadkii mushaar ahaan loo siiyo £100,000, balse waa uu beeniyey in khilaafka heshiiskiisa uu la xiriiro arrimo lacago ah.
Waxana uu sheegay inuusan ahayn nin lacagta si aad ah u jecel balse ciyaarta kubbada cagta ay agtiisa muhiim ka tahay isagoo soo xusuusiyey saxaafada in heshiiskiisii ugu dambeeyey uu qatay muddo lix bilood ah.